२० वर्ष पार गरेपछि युवतीहरूमा आउँछन यस्ता ५ परिवर्तन ! – Online Khabar 24
२० वर्ष पार गरेपछि युवतीहरूमा आउँछन यस्ता ५ परिवर्तन !
January 29, 2021 by admin admin
महिलाकाे उमेर २० पार गरेपछि केहि चिजहरुकाे परिवर्तन हुन्छ। उनीहरुकाे उमेरसँगै हरेक चिजमा परिवर्तन आइरहन्छ ।
यसबेलामा अनेक खालका स्वा’स्थ्य स’म’स्या समेत उत्पन्न हुन सक्ने हुँदा स्वास्थ्य जाँच गराइ’राख्नु पर्ने चिकि’त्सक’हरुको सुझाव छ ।
२० वर्ष पार गरेपछि महिलामा आउने ५ परिवर्तन हर्मो’नको अस’न्तु’लन बढ्दै जान्छ । जसका कारण महि’ना’वारीमा समस्या
उत्पन्न हुन सक्छ । फलफूल र सब्जीमा प्रशस्तमात्रामा आइरन, भिटामिन, मिनरल्स पाइन्छ । म’हि’नावा’रीमा सम’स्या
स’माधा’नका लागि प्रशस्त मात्रामा फलफूल र हरियो सब्जी खानुपर्ने हुन्छ ।
उमेरमा परिवर्तनसँगै महिलामा देखिने अर्को परिवर्तन कपाल (रौं) हो । महिलाको गु’प्तां’ग, छा’ती र पेटमा अ’स्वाभा’विक रुपमा
कपाल उम्रन सक्छ । यस्ता अस्वा’भाविक कपाल हटाउनको लागि क्रिम या रेजको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । रेजरको सहायताले रौंलाई स्थायीरुपमा समेत हटाउन सकिन्छ ।
ह’र्मो’नमा आउने परिवर्तनका कारण कपाल सुख्खा तथा जिं’ग्रिङ्ग बन्न पनि सक्छ । यस्तो बेला ३-४ चम्चा’ जै’तुन’को तेलले मालिस गर्दा उत्तम हुन्छ । युवतीमा देखिने अर्को सम’स्या-ड’न्डी’फोर । ह’र्मोनमा हुने परिवर्तनका कारण डन्डि”फोर’का साथै
छा’ला सु’ख्खा हुने स’म’स्या समेत उत्पन्न हुनेगर्छ। चिल्लो खानेकुरा कम खानुस्, साथसाथै दिनको २ देखि तीन पटकसम्म अनुहार धुँदा उत्तम हुन्छ । यसले अनुहारमा चि’ल्लोको मात्रा कम हुन्छ र ड’न्डि’फोर’को स’म’स्या हट्छ ।
महिलाको मेटा’बलिज्म स्लो हुँदै जान्छ र तौल बढ्दै जान सक्छ । तौललाई स्थी’र राखिराख्नको लागि चिल्लो र का’र्बोहा’इड्रे’ड’युक्त खाना कम गर्नुपर्छ । यस्तै दैनिक बिहान ३० मिनेट म’र्नि’ङवाक पनि लाभ’दायक मानिन्छ । एजेन्सी
Prevम’हिना’वारीको समयमा यौ’न सम्पर्क गर्न हुन्छ की हुदैन ? डा. सबिना (भिडियो सहित)
nextआफुले लगाएको ड्रेस च्यातिएपछि प्रियंकाको भयो हालत यस्तो, पुरा पढनुुस